स्थानीय तह, नेतृत्व र नागरिक सेवा | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण स्थानीय तह, नेतृत्व र नागरिक सेवा
स्थानीय तह, नेतृत्व र नागरिक सेवा
नागरिक सेवा राज्यले उपलब्ध गराउने वा सम्बोधन हुने नागरिक अधिकारका आवश्यकताहरूको सार्वजनिक सेवामार्फत हुने आपूर्ति हो । सार्वजनिक सेवा समान र सम्मानजनक रूपमा नागरिकहरूले प्राप्त गर्न सक्नुलाई सफल शासकीय नमूना मानिन्छ । राज्यको क्षेत्राधिकारभित्र र बाहिर राज्यले उपलब्ध गराउने सेवाका साथै नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व वहन गर्ने विषयवस्तुहरू सार्वजनिक सेवाका तत्त्व हुन् । सार्वजनिक सेवाको बढी उपयोग गर्ने उपभोक्ताहरू मध्यम र निम्न वर्गीय श्रेणीका नागरिक हुन्छन् । त्यसैगरी, सार्वजनिक सेवाको परिचालन गर्ने कार्यालयहरूमा पनि स्थानीय तह वा स्थानीय तहमा सेवा प्रदान गर्ने सार्वजनिक निकायहरू बढी पर्छन् । आजसम्मको इतिहास र राजनीतिक व्यवस्थालाई नियाल्ने हो भने नेपालमा अहिलेको स्थानीय तहले पाएको क्षेत्राधिकार सबैभन्दा परिष्कृत छ । तसर्थ यो अवसरको पूर्ण उपयोग अबको स्थानीय तहले नागरिकको आवश्यकता आपूर्तिका लागि गर्नुपर्नेछ ।
नेपालको स्थानीय तह लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन बन्यो । त्यो अवस्था नागरिक सेवा प्रवाह, स्थानीय तहको विकास र समृद्धिका लागि ठूलो व्यवधान बनेको थियो । नागरिकस्तरमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको दायराभित्र सामान्यतया विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातलगायत सेवाहरू जोडिन्छन् । विभिन्न संस्थागत व्यवस्था, सार्वजनिक क्षेत्रको विविधीकरण, समय व्यवस्थापन र सुधारका अनेकौं योजनाहरू अवलम्बन गरे पनि सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायहरूप्रति जनताको विश्वास सकारात्मक बन्न सकेको छैन । तसर्थ, नेपालमा सार्वजनिक सेवालाई नागरिक सेवाका रूपमा ग्रहण गर्न अपरिहार्य भएकाले त्यसका लागि सार्वजनिक सेवाको अभ्यासलाई नयाँ स्थानीय तहले रूपान्तरण गराउनु जरुरी देखिन्छ । नयाँ स्थानीय तहको संरचना र अधिकारका दृष्टिकोणले अबको दिनमा स्थानीय स्रोतको पहिचान र उपयोग गरी दैनन्दिन नागरिक सेवामा समर्पित हुने सामथ्र्य बनाउनु समृद्धिका लागि कोशेढुङ्गा हुन सक्छ ।
आजसम्म नेपालमा स्थानीय तहमा सार्वजनिक सेवाको अवस्था केन्द्रस्तरको आदेशात्मक शैलीमा चल्दथ्यो । स्थानीय तह र विशेषतः ग्रामीण समुदायमा सेवाग्राहीले पाउने सेवाको पहुँच र अवस्थाका बारेमा आजसम्म केन्द्रको गहिरो चासोे रहेको देखिएन । तसर्थ अबको स्थानीय नेतृत्व स्थानीय तहका जीवन्त सम्भावनाहरूको पहिचान गर्दै परिष्कृत र विकसित नेपाल बनाउने आधार संवाहक हुनुपर्ने समय हो । तसर्थ, सबै सम्भावनालाई प्रतिफलयोग्य बनाउनु स्थानीय नेतृत्वका लागि एउटा चुनौती हो । सम्भावनाहरूको पहिचान गरी त्यसबाट प्रतिफल र उक्त प्रतिफलको दिगो संरक्षणका लागि स्थानीय तहमा अबको नेतृत्वको परीक्षा हुन सक्छ । यही परीक्षाबाट नयाँ नेतृत्वको विकास र दूरदर्शी नेतृत्वको अभाव परिपूर्ति हुनसक्छ । असङ्ख्य र जीवन्त सम्भावनालाई स्रोतका रूपमा पहिचान गर्ने र नेपालको सम्मुन्नत विकासका लागि उक्त स्रोतहरूको उपयोग गर्ने क्षमताको विकास र वातावरणको सृजना गर्न सकेको खण्डमा समृद्ध नेपाल स्थानीय तहको विकासको प्रक्रियाबाट सम्भव देखिन्छ ।
स्थानीय निकायबाट प्रदान हुने सेवा प्रभावकारी नहुनुमा प्रायः आजसम्म स्थानीय तह वा सार्वजनिक निकायका संयन्त्र नै प्रमुख दोषीपात्रका रूपमा रहेका थिए । स्रोत तथा साधनको अभावलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने पनि हामीले प्राप्त गर्ने सेवाको गुणस्तरमा प्रश्न लगाउने अधिकार हामीलाई नहुने देखिन्छ । लामो समयदेखि नेपालका स्थानीय निकायहरू पदाधिकारी विहीन थिए र भएको स्रोतमा पनि राज्यको अधिकार स्थापित थियो । नागरिकको सेवामा आउने कर्मचारीको सेवाको गुणस्तर न्यूनस्तरको थियो । यस कारण स्थानीय तहको सेवा नागरिक सेवाको पर्याय बन्न सकेको थिएन । मानवीय स्रोतसँगै कानूनी अड्चन र भौतिक पूर्वाधारको अभाव पनि नागरिक सेवाको प्रभावकारिताका लागि बाधक बनेको थियो । तर, स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी नयाँ कानूनसमेत आइसकेको परिप्रेक्ष्यमा अबको स्थानीय तह आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने ठाउँ छैन ।
स्थानीय तहका लागि मानवीय स्रोतको दक्षता अभिवृद्धि सेवा प्रभावकारीताका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो । यसले सेवाको गुणस्तरीयतामा विश्वास दिलाउने काम गर्छ । अहिलेको परिस्थितिमा प्रायः एकपटक सेवा लिन पुगेको सेवाग्राही अर्कोपटक फेरि त्यहीँ जानलाई आनाकानी गरिरहेको पाइन्छ । फलस्वरूप स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह गर्ने शैलीलाई नयाँ पुस्ताले रुचाएको पाइँदैन । प्रविधिमा निर्भर र दक्ष जनशक्तिको पदस्थापनले मात्र स्थानीय तहमा सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारीता बढाउने देखिन्छ । प्रविधिको प्रयोग अत्यावश्यक हो । तर, प्रविधि पनि मानवीय स्रोतको विकल्प हुन सक्दैन । प्रविधि र मानवीय स्रोतको समुचित व्यवस्थापनले मात्र सेवाको गतिशीलता प्राप्त गर्न सकिन्छ । अर्थात् मानवीय जनशक्तिलाई सजीव ऊर्जाका रूपमा रणनीतिक उपयोग गर्ने योजना हुनु स्थानीय तहका लागि आवश्यक छ । स्थानीय तहको उत्पादकत्वमा समेत सकारात्मक वृद्धि गर्ने प्रयोजनले मानवीय स्रोतको उत्प्रेरणा बढाई स्थानीय तहको सेवामा गतिशीलता प्राप्त गर्नु आवश्यक छ ।
स्थानीय तहको संरचनागत अवस्था फेरिएको छ । यसलाई सेवाग्राहीको हितअनुकूल उपयोग गर्ने परिपाटी बनाउनु आवश्यक छ । स्थानीय तहको परिवर्तित सङ्गठनात्मक संरचनालाई पनि कामको गतिशीलता बढाउन उपयोग गरे अझै सहज हुन्छ । पूर्णस्वायत्त अधिकार दिइएकाले अधिकारको उपयोग गर्न सक्ने दक्षता, स्रोत र मनोबलको अभाव अबको स्थानीय तह सञ्चालनस्तरमा देखिनुहुँदैन । त्यसैगरी सेवा प्रदायक संस्थाहरू आफैं सेवाग्राहीका रूपमा अन्य निकायमा धाएर काम लिनुपर्ने बाध्यता पनि यस्ता तहहरूको समन्वयात्मक प्रणालीले विस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । दोहोरो मापदण्डका आधारमा कतिपय स्थानीय तहका सेवा प्रदायकले अनगिन्ती सरकारी र सार्वजनिक निकायहरूको मातहतमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता अब हट्ने देखिन्छ । अबका दिनमा भौगोलिक विकटता, पूर्वाधारको अभाव वा स्रोतको परिचालनमा समस्याजस्ता कारणले स्थानीय तहहरू व्यवसायविहीन हुने अवस्था हट्नु पनि सार्वजनिक सेवाको पहुँचको दायरा विस्तारका लागि अत्यावश्यक छ ।
सेवाग्राहीको भूमिका पनि स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायमा सहयोगात्मक हुनु आवश्यक छ । स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायहरूले नागरिकको सहयोग पाएमा सेवाको पहुँच विस्तारमा सहज हुने देखिन्छ । स्थानीय तह केन्द्रीय निकायजस्तो स्रोत र साधन सम्पन्न नहुने भएकाले सेवाग्राहीको भूमिका सहयोगात्मक भएमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सेवाको प्रभावकारितामा पर्ने निश्चित छ । अर्थात् सार्वजनिक सेवा पाउनु नागरिकहरूको नैसर्गिक अधिकार हो भने सेवाको प्रभावकारिता वृद्धिका लागि सहजकर्ताका रूपमा भूमिका खेल्नु सचेत नागरिकको कर्तव्य पनि हो । यसले गर्दा सेवा प्रदायक संस्थाहरू उत्तरदायी, जवाफदेही, जिम्मेवार र पारदर्शी भई नागरिक सेवामा तल्लीन रहन्छन् ।
नागरिक सचेतनाले नै एकातिर स्रोत तथा साधन, दक्षता, उत्प्रेरणा र सेवाग्राहीको भूमिकाले नागरिक सेवाको प्रभावकारीतामा वृद्धि गर्छ भने अर्कातिर नागरिक सेवाको कार्यसमेत क्रमशः गुणस्तरीय बन्न सक्छ । नागरिकका अतिरिक्त सेवा प्रवाहलाई कसरी छिटोछरितो, नयाँपन दिलाई अगाडि लैजान सकिन्छ भन्नेमा स्थानीय तहसम्बद्ध संयन्त्रहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ । सामाजिक न्याय र सुशासन सबैले बोल्ने विषय बनेको छ । तर, स्थानीय तहको सार्वजनिक सेवालाई सैद्धान्तिक विषयको सूचीमा आबद्ध गर्ने गरेको कम मात्र देखिन्छ । तसर्थ सार्वजनिक सेवालाई तहगत रूपमा अध्ययन र विश्लेषण गरी नागरिक सेवाका रूपमा व्याख्या गर्न अब आरम्भ हुने भएको छ ।
स्थानीय तहको नयाँ संरचनाअनुसार निर्वाचनसमेत भई स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, २०७४ कार्यान्यनमा आइसकेको छ । तसर्थ नेतृत्वलाई नेपालको सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास र समृद्धिका लागि संवाहक बन्ने व्यापक अवसरहरू प्राप्त हुने देखिन्छ । के अबको नेतृत्व ती अवसरको पहिचान, परिचालन र दिगो संरक्षण गर्न सक्षम हुन्छ त ? के आफ्नो राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट माथि उठेर स्थानीय तहको नेतृत्वपङ्क्ति विकासको नयाँ यज्ञमा आहुति हुन तयार छ त ? के वर्तमान राजनीतिक शक्तिहरूले नेतृत्वपङ्क्तिलाई विकासमा समाहित हुन प्रशिक्षित गरेका छन् ? के अबको स्थानीय तहको नेतृत्व नागरिक सेवाको पक्षपोषणमा केन्द्रित हुन्छ ? यी समग्र विषयमाथिको नतीजामा आगामी दिनमा स्थानीय नेतृत्वको मूल्याङ्कन हुनु आवश्यक छ । स्थानीय तह आफैंमा संरचना मात्र हो । तर, नेतृत्व दूरद्रष्टा बनोस् र नागरिक सेवाहरूको आपूर्ति सुनिश्चित होस्, नयाँ नेतृत्वलाई शुभकामना ।